iPad Pro famerenana - ny famoronana ny hoavy mijery tsara - News Fitsipika
iPad Pro famerenana - ny famoronana ny hoavy mijery tsara
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “iPad Pro famerenana - ny famoronana ny hoavy mijery tsara” dia nosoratan'i Toby Mosesy, fa ny Mpandinika ny Alahady 29 Novambra 2015 07.00 UTC
Ny fahatsapana voalohany ny farany fidirana amin'ny Apple ny takelaka isan-karazany - ny iPad Pro (avy £ 679, apple.com) - Dia avy ny 5.6 megapixel, 32.8cm (12.9amin'ny) efijery, izay mihoatra noho ny habeny sy ny vahaolana amin'ny zavatra Apple no nanatitra teo aloha. Toa manaitra. Afo ny iray Pro-optimisé lalao toy ny The Room Telo (£ 3.99, Fireproof, App Store) Ary ranolava any amin'ny fiainana. Ary koa ny hatsarana hita ody, amin'ny tricksy puzzler toy izao, ny nanampy antsipirihany dia ny tena soa rehefa miandry hotenenin'ny, manala sy tarihiny piozila vata manodidina mba handroso. Ny sehatra ny andian-dahatsoratra dia nitatra amin'ny faharoa tohiny, amin'ny efi-trano maro samy lasa anisan'ny ny piozila, fa tsy mifantoka afa-tsy amin'ny boaty ny tenany. Tena mahafa-po fampandrosoana sy vokam tsara indrindra ity fitaovana vaovao.
Apple ny Tim Cook Namoaka ny iPad Pro - Video.
Na izany aza, izany ny kajy amin'ny solosaina, heft ambanin'ny malamalama ivelany izay azo antoka fa tena volana. Mahery vaika kokoa noho ny ankamaroan'ny solosaina finday, manamafy Apple, ary afaka fanovana 4K Video - efatra heny noho ny fari-tsipiriany HD TV - izay midika fa iMovie (maimaim-poana miaraka amin'ny fitaovana) avy any ny azy. Ny Pro tsy hanolo ny solosaina ho an'ny avo-end mpampiasa - ny voafetra on-solaitrabe fahatsiarovana mahita izany - fa tanteraka noho ny famoronana ny fanciest ny an-trano filma mba hitafy ny YouTube.
Ny Microsoft Office manontolo tariny dia tsy ampy ho an'ny maimaim-poana amin'ny alalan'ny App Store (Na dia misy in-fampiharana fividianana dia ilaina ny manova rakitra), ary ny goavana touchscreen, miaraka amin'ny fitendry vaovao connector, mahatonga miasa eo aminy ny tsio-drivotra - na amin'ny Apple ny minimalist famotsorana (£ 139) na ny sturdier, backlit fanatitra avy amin'ny Logitech (£ 109,99). miteraka (£ 4,49, App Store) manolotra famoronana kokoa jery ary ankehitriny aza manolotra lehibe fametrahana mazava tsara ny famotsorana Apple Pensilihazo (£ 79). Izany ihany no miasa amin'ny Pro, ary azo antoka ny ho akany kevitra, nefa interacts amin'ny Sela Mpandray Hafanana ambanin'ny lamba mba hamela fanaraha-maso izay azo antoka fa hahaliana ny mpanakanto. Jereo fotsiny izay David Hockney tontosa tamin'ny tany lemaka antitra iPad - Mety ho tsy mahagaga ny mahita ny taranaka manaraka nanosika ny fetra ny zavatra mety hahazo nomerika hosodoko.
Paoma, Article, Computing, mpanao tsikera, Kolontsaina, Games, iPad, Famerenana, Tablet ordinatera, Teknolojia, The New Review, ny Mpandinika, Toby Mosesy
← Folo ny tsara indrindra noho ny fanaovana fampiharana ny Krismasy fiantsenana Hita toy ny sombin-javatra Gold Zavatra The Real anefa no 98 isan-jato Air [VIDEO] →